Ukuhlaziywa kwengqikithi yeVicente Aleixandre | Izincwadi Zamanje
Izingqikithi nezitayela eziphindaphindwayo ezinkondlweni zikaVicente Aleixandre
Ezincwadini ze- UVicente Aleixandre Singabona izingqikithi ezithile eziphindaphindeka zivele kaninginingi, zikwenze kucace ukuthi yiziphi izinkathazo nokukhathazeka kwale mbongi eyaziwayo yaseSpain:
El uthando Ingenye yazo futhi ikhonjiswa ngecala eliqinile lezocansi futhi njengomthombo wokuphila namandla, kodwa nokho okungaholela ekubhujisweni kwalabo abezwa le mizwa. Isifiso sakho siyinjini yothando.
Omunye umthombo wokuphila nomunye wezindikimba eziphindaphindayo ku-Aleixandre yi- imvelo, lapho efihla khona izimfanelo ezingenakubalwa akholelwa ukuthi umuntu kufanele alingise ukuze athuthuke kanjalo. Ukufisa ukufana nemvelo kufanele kube yinto enhle kakhulu yabesilisa nabesifazane ekufuneni ukuphelela nokuhlanganiswa nakho konke okuphezulu okungeyona enye into ngaphandle kobunye bazo zonke izinto.
Ekugcineni singasho ukuthi u-Aleixandre uthanda ukudlala ngezitho zomzimba womuntu eziphathwe ngokuzimela kanye nokufaka izithombe ezinjengephupho nezingenangqondo, into ejwayelekile yokuziphendulela ayethanda ngayo njalo nokuthi izinqubo zakhe zesigqi zaziziningi, zihlukahlukene kakhulu futhi zisuka enkondlweni eyodwa komunye egqamisa ukusebenzisa kwakhe okuhle kwefayela le- isikhulumi njengenqubo yomculo.
Imininingwane engaphezulu - Ukuvela kwesizukulwane sika '27
Isithombe - ISpain isiko
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Izingqikithi nezitayela eziphindaphindwayo ezinkondlweni zikaVicente Aleixandre